सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब १०.१ (२०१)): निर्दिष्टीकरण, मूल्य र रिलिज | Androidsis
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब १०.१ (२०१)): ठूलो स्क्रिन र सस्तो मूल्य
ईडर फेरेनो | | Samsung, Android ट्याब्लेटहरू
सामसुले आधिकारिक हिजो ट्याब्लेट बजारमा आधिकारिक रूपमा यसको नयाँ फ्ल्यागशिप प्रस्तुत गर्‍यो, ग्यालेक्स्ट ट्याब S5e। यद्यपि यो मोडेल कोरियाली फर्मले छोडेको मात्र थिएन। र पनि ग्यालक्सी ट्याब १०.१ (२०१)) आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यो ट्याब्लेट बजारमा एक फरक क्षेत्रमा पुग्छ। यो एक ठूलो स्क्रीन संग अधिक पहुँच योग्य, गुणस्तर विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
त्यसो भए यो अर्को राम्रो विकल्प हो, जसले ट्याब्लेटको यस दायरा को नवीकरण कोरियाली ब्रान्ड द्वारा। ग्यालक्सी ट्याब १०.१ (२०१ 10.1) लाई अन्य मोडेल जत्तिकै ध्यान उत्पन्न गर्न भनिएको छैन। यद्यपि यो ट्याब्लेट हो जुन एक धेरै विशिष्ट दर्शकहरू हुन सक्दछ। हामी उनको बारेमा अझ बढी बताउँछौं।
यो ट्याब्लेटमा हिजो जस्तो शानदार प्रस्तुतीकरण छैन। यसको प्रक्षेपण अधिक विवेकी र भएको छ जर्मनी मा एक कार्यक्रम मा गरिएको छ। तर हामीसँग पहिले नै यो नयाँ ट्याब्लेटमा सबै डाटा कोरियाली फर्मबाट छ। हिजोको मोडेल भन्दा अधिक आधारभूत हार्डवेयर, तर विचार गर्न अझै राम्रो विकल्प छ।
1 निर्दिष्टीकरण ग्यालक्सी टैब १०.१ (२०१))
निर्दिष्टीकरण ग्यालक्सी टैब १०.१ (२०१))
यो मुख्य रूपमा प्रयोगकर्ताहरूको लागि सुरू गरिएको हो एक ट्याब्लेट चाहनुहुन्छ जुनसँग उनीहरूले सामग्री खपत गर्न सक्दछन्। राम्रो रिजोलुसनको साथ एक ठूलो स्क्रिन, तौलमा हल्का र अनुरूप विनिर्देशहरू। उत्तम जब यो एक यात्रा मा लिन को लागी आउँछ। यी सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब १०.१ (२०१)) का स्पेसिफिकेसनहरू हुन्:
स्क्रिन: १०.१ ईन्च TFT १ 10,1 २० × १२०० पिक्सेल रिजोलुसनको साथ
प्रोसेसर: Exynos 7904 अक्टा कोर
RAM:2जीबी
आन्तरिक भण्डारण: GB२ जीबी (GB०० जीबी सम्म माइक्रोएसडीको साथ विस्तारयोग्य)
GPU: माली G71 MP2
रियर क्यामेरा: 8 सांसद
अगाडिको क्यामरा:5सांसद
पोर्टहरू: USB-C प्रकार 3.1.१
कनेक्टिविटी: ब्लुटुथ .5.0.०, GPS, GLONASS, Beiduo, गैलीलियो, WiFi, LTE, 4G
ब्याट्री: 6.150 एमएएच द्रुत चार्जको साथ।
रंगहरू: सुन, कालो र चाँदी
अपरेटिंग प्रणाली: एक अनुकूलन तह को रूप मा एक UI साथ एन्ड्रोइड9पाई
ट्याब्लेटको दुई संस्करणहरू जारी गरियो। ती मध्ये एक वाइफाइ र G जी / एलटीईको साथ आउने छ, जबकि हामीसँग वाइफाइको साथ अर्को हुनेछ। यो कोरियन ब्रान्डको ट्याब्लेटको लागि दुई संस्करणहरू हुनु सामान्य हुन्छ। त्यसैले यस सम्बन्धमा धेरै आश्चर्यहरू छैनन्। डिजाइनको सर्तमा, ट्याब्लेटले पातलो फ्रेमहरूको साथ स्क्रिनको लागि अप्ट गर्दछ, जसले तपाईंलाई अगाडिको पूरा फाइदा लिन मद्दत गर्दछ।
एक राम्रो विकल्प जब यो यसमा सामग्री खपत गर्न आउँछ। यस ग्यालक्सी ट्याब १०.१ (२०१ 10.1) पछि सामग्री हेर्दा अधिक इमर्सिभ अनुभवको आश्वासन दिन्छ उहीमा। अन्यथा, क्यामेराले ट्याब्लेटको अपेक्षित रूपमा राम्रो काम गर्दछ। प्रोसेसरले भने यो पर्याप्त र्यामको साथ प्रदान गर्दछ, र्याम र भण्डारणको साथ संयोजनमा। भण्डारण जुन कुनै पनि समय विस्तार गर्न सकिन्छ।
अब जन्मजात एन्ड्रोइड पाईको साथ आउँछ। त्यसोभए प्रयोगकर्ताहरूले अब सब भन्दा पछिल्लो संस्करणको मज्जा लिन सक्छन्। अरु के छ त, वन यूआईको साथ अब आइपुग्छ, सामसु'sको नविकरण ईन्टरफेस आधिकारिक रूपमा नोभेम्बरमा प्रस्तुत गरियो। एक सरल तरिकामा सँधै राम्रो नेविगेशनका लागि डिजाइन गरिएको।
यस समयमा जर्मनी मात्र बजार हो जहाँ यस ट्याब्लेटको सुरुवात निश्चित गरिएको छ। जे होस् सबै चीजले संकेत गर्दछ कि हामी यसलाई अन्य बजारमा पनि किन्न सक्षम हुनेछौं। यो दुर्लभ हुनेछ यदि यो जर्मन बजारमा विशेष थियो। दुर्भाग्यवस, यो त्यस्तो चीज होइन जुन अहिलेको लागि निश्चित गरिएको छ। हिजोको मोडेल जस्तै, यसको सुरुवात अप्रिल महिनाको लागि निर्धारित छ.
मूल्यको बारेमा जुन यो ग्यालक्सी ट्याब १०.१ (२०१)), हामीसँग पहिले नै खबर छ। हिजो, उहीको प्रस्तुतीकरणमा, जर्मनीको लागि तिनीहरूको मूल्यहरू पुष्टि भयो। सम्भवतः तिनीहरू स्पेनमा पनि त्यस्तै हुनेछन्। यदि त्यहाँ भिन्नताहरू छन् भने तिनीहरू न्यूनतम हुनेछन्। ट्याब्लेटको प्रत्येक संस्करणको मूल्यहरू:
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब १०.१ (२०१)) केवल WiFi: २१० यूरोको साथ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब १०.१ (२०१)) वाईफाई र G जी एलटीई: २10.1० युरोको साथ
कोरियाली फर्म को लागी एक सस्तो मूल्य। त्यसोभए यो ट्याब्लेट हुन सक्छ जुन बजारमा धेरै लोकप्रिय छ। हामीले छिट्टै स्पेनमा यसको प्रक्षेपणको समाचारको लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। तपाइँ यस नयाँ Samsung ट्याब्लेटको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब १०.१ (२०१)): ठूलो स्क्रिन र सस्तो मूल्य
२०१ in मा एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो खेलहरू
लिन: बगैचाको बाटो, एक धेरै सावधानी दृश्य पक्षको साथ एक महान पजल प्लेटफार्मर